အိန်ဒိယ ရေကာတာ ဆည်များ – INDIAN DAMS AND RESERVOIRS III | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » အိန်ဒိယ ရေကာတာ ဆည်များ – INDIAN DAMS AND RESERVOIRS III
အိန်ဒိယ ရေကာတာ ဆည်များ – INDIAN DAMS AND RESERVOIRS III
Posted by Kyaemon on May 27, 2012 in Education, Know-How, DIY, Style & Beauty, Think Different, Travel | 11 comments
india Indian Dams and Reservoirs
အိန်ဒိယ ရေကာတာ ဆည်များ အကြောင်းတစေ့တစောင်း လေ့လာရအောင်၊
အိန်ဒိယ ရေကာတာ အကြီးဆုံး ငါး ခု
After independence we have made lots of progress in Dam and water reservoirs, Now India is one of the world’s most prolific dam-builders. Around 4300 large dams already constructed and many more in the pipeline, Almost half of which are more than twenty years old. These dams are major attraction of tourists from all over India. Some facts about the Indian dams are: Tehri Dam is the eighth highest dam in the world. The Idukki dam is the first Indian arch dam in Periyar River Kerala and the largest arch dam in Asia. The Grand Anicut, Kallanai, located on Holy Cavery River in Tamil Nadu, is the oldest dam in the world. Indira Sagar Dam is the Largest Reservoir in India. These dams with the channel provides an ideal environment for wildlife.
အိန်ဒိယမှာ အမြင့်ဆုံး ၂၆၁ မီတာ
ကမ်ဘာမှာ # ၈ အမြင့်ဆုံး
၂၀၀၆ မှာပဌမအဆင့် ပြီး
ဆည်မြောင်း၊ သောက်သုံးရေ၊ ၁၀၀၀ MW ဓာတ်အားထုတ်
Tehri Dam: Tehri Dam located on the Bhagirathi River, Uttaranchal Now become Uttarakhand. Tehri Dam is the highest dam in India,Withaheight of 261 meters and the eighth tallest dam in the world. The high rock and earth-fill embankment dam first phase was completed in 2006 and other two phases are under construction. The Dam water reservoir use for irrigation, municipal water supply and the generation of 1,000 MW of hydroelectricity.
ဘက်ကရာ နန်ဂယ် ရေကာတာ
အိန်ဒိယမှာ အကြီးဆုံး ၂၂၅ မီတာမြင့်တာ
အာရှမှာ # ၂ အကြီးဆုံး
အိန်ဒိယမှာ ရေလှောင်ကန် ဒုတိယအကြီးဆုံး
Bhakra Nangal Dam: Bhakra Nangal Dam isagravity dam across the sutlej river Himachal Pradesh. Bhakra Nangal is the largest dam in India, withaheight of 225 meters and second largest Dam in Asia. Its reservoir, known as the “Gobind Sagar Lake” it is the second largest reservoir in India, the first being Indira Sagar dam.
အိန်ဒိယမှာ အရှည်ဆုံး ၂၅ ကီလို မီတာ အလျားရှိ
ရေကြီးတာကိုကာကွယ်ဘို့ ဆည်မြောင်းရေလွှတ် ဘို့ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဘို့
Hirakud Dam: Hirakud dam built across the Mahanadi River in tribal state Orissa. Hirakud Dam is one of the longest dams in the world about 26 km in length. There are two observation towers on the dam one is “Gandhi Minar” and another one is “Nehru Minar”. The Hirakud Reservoir is 55 km long used as multipurpose scheme intended for flood control, irrigation and power generation. It was one of the major multipurpose river valley project after Independence
နဂါးဂျွန်န စဂါး ရေကာတာ
ကမ်ဘာမှာ အင်ဂတေ ပန်ရံလုပ် ရေကာတာ မှာ အကြီးဆုံး
အာမြင့်မှာ ၁၂၄ မီတာ
ကမ်ဘာမှာ လူဖန်တီး တဲ့ရေကန် မှာအကြီးဆုံး
၁၆ကီလိုမီတာရှည် ပြီး ရေလွှတ်ပေါက် ဂိတ်တံခါး ၂၆ ခု ဟာ
အိန်ဒိယ ဗိသုကာ နဲ့စက်မှုသိပ်ပံအတတ်ပညာအတွက် ဂုဏ်ယူစရာ
Nagarjunasagar Dam: Nagarjuna Sagar Dam is the world’s largest masonry dam withaheight of 124 meters, built across Krishna River in Andhra Pradesh. Nagarjuna Sagar Dam is certainly the pride of India-considered the largest man-made lake in the world. The 1.6 km long with 26 gates dam was symbol of modern India’s architectural and technological triumphs over nature.
စာဒါ စာရိုဗာ ရေကာတာ နာမဒါ လို့လဲခေါ်တာ
ရေခေါင်းပါး တတ်တဲ့ ဒေသ ၂ ခု သို့ဆီ ဆည်မြောင်းရေလွှတ်ဘို့
ဓာတ်အား ၂၀၀ MW ထိ ထွက် ပြည်နယ်ကြီး ၄ ခု အတွက် အကျိုးပေးတာ
Sardar Sarovar Dam: Sardar Sarovar Dam also known as “Narmada Dam” is the largest dam to be built, withaheight of 163 meters, over the Sacred Narmada River in Gujarat. Drought prone areas of Kutch and Saurashtra will get irrigate by this project. The gravity dam is the largest dam of Narmada Valley Project with power facilities up to 200 MW. The dam is meant to benefit the4major states of India Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan
နောက်ထပ် ရေကာတာ ၁၀ ခု ကြည့် ဘို့ လင့်ခ ကိုနှိပ်ပါ
Top 10 major Dams of India | WalkThroughIndia
ကျနော် လဲ သိပ် ကျွမ်းတာမဟုတ်ပါ လို့ အရင်ဆုံးဝန်ခံရမှာ ပါ၊
သို့သော် က်ိုကိုအိုဗာ လိုသိချင်လို့လိုက်လေ့လာတာပါ၊
သာမန်လိုဖြေရ မယ်ဆိုရင်၊ အိန်ဒိယ က တိုးတက်လာ နေတာသိထားလို့
သေချာ ထပ်ကြည့် တာ အောက်ပါ အဖြေတွေထွက်နေတာ၊
အီရန် က နေ လဲ ဝယ် တယ်/မယ် (မဖူလုံတာပြ)
Iran to Sell 5,000 Megawatts Electricity to India, Press TV Says
Iran plans to export 5,000 megawatts of electricity to neighboring India, state-run Press TV reported, citing Energy Minister Majid Namjou.
The Persian Gulf nation wants to sell power instead of natural gas because electricity sales will be more cost- effective, the broadcaster said, without elaborating. Iran hadatotal generating capacity of 53,000 megawatts before 2009, according to the report on Press TV’s website.
International sanctions against Iran over its nuclear program are threateninga$9.5 billion annual trade in crude oil between India and Iran, the second-largest producer in OPEC.
ပါကစ်စတန် ကို ရောင်း မှာ (ပိုလျှံတာ ပြ)
Islamabad – Pakistan and India are to begin technical talks for installing the joint electricity transmission system between Amritsar and Dina Nath, Lahore. A delegation from New Delhi will be visiting Islamabad and hold talks on April 1,asenior official told Pakistan Observer. The electricity transmission infrastructure is vital to import electricity of 500 MW from India and the said infrastructure will also be used to export electricity The Indian side has proposed date of April 1, which is not yet finalized and may be changed. However, Pak-India meeting is to be held soon to finalize the technical issues pertaining to the installation of the electricity transmission system.
The official at Ministry of Water and Power said that Pakistan will primarily import 500 MW and in case it needs more then it will import another 500 MW…..
အိန်ဒိယနိုင်ငံ က Bhutan ဘူတန် နိုင်ငံထံမှ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကပင်ယခုထိ ဓာတ်အား ဝယ် နေ တာ၊
ခုတလော Bhutan ဘူတန် က လုပ်ငန်း ပိုမို တိုးတက် လာလို့ အိန်ဒိယ နိုင်ငံ ကဘူတန်ကိုဘဲ စတင်ပြီးနှစ်တိုင်း “ပြန်ရောင်း” ဘို့လုပ်နေတာ
…Power import from Bhutan is progressively declining as availability of surplus electricity in the neighbouring country thins due to its rising consumption.
Bhutan is expected to export only 5,480 million units of electricity to India in 2012-13, compared to 6,500 million units in 2010-11 and 5,586 million units in 2011-12 According to sources in the Indian government, the falling import quantum is due to reduction in availability of surplus power in the country.
Bhutan is estimated to have potential to generate 30,000 mw electricity from its hydro- resources. Indian public sector companies like NHPC and NTPC are investing in hydropower projects in Bhutan in the hope of exporting surplus power to India. Tala hydropower plant is an example of bilateral cooperation between the two countries.
Meanwhile, Bhutan has expressed interest to buy power from India. Following that, the government has asked PTC India to negotiate terms and conditions for power export to Bhutan. “Bhutan needs base-load power. We are in talks with Bhutanese officials to export power,” said Tantra Narayan Thakur, chairman, PTC India….
TWh – Terrawatt ဆိုတာ တစ် နောက် မှာ “၀” ဂဏန်း ၁၂ လုံး watt ဝက်ဒ် (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀)
GWh – Gigawatt ဆိုတာ တစ် နောက် မှာ “၀” ဂဏန်း ၉ လုံး watt ဝက်ဒ် (၁,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀)
ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား တစ်ရာ % နီးပါး
ဘန်ဂလာဒဲ့စ် ကလဲ အိန်ဒိယ နဲ့ မြန်မာတို့ဆီက ဝယ်မယ်
Posted on | mei 30, 2011 | No Comments
…The government led by Shiekh Hasina is contemplating to import power from neighboring India and Burma. The prime minister’s representative held parleys with the two neighboring governments in the last two years.
Meanwhile, the import of 250-MW of electricity from India has already missed the schedule in last March. The signing of the deal with India will be furthered delayed as the governments of the two countries failed to reach any settlement over the dispute regarding transmission of electricity….
India- Exports of Electricity
Historical Data Graphs per Year
Country Comparison – Exports of Electricity
Electricity Exports – World map
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရောင်း တဲ့နိုင်ငံများ အမှတ်စဉ်အလိုက်
Rank	Country	Electricity – exports (million kWh)
1	Germany	61,700	￼
2	France	58,690	￼
3	Canada	55,730	￼
4	Switzerland	54,200	￼
5	Paraguay	45,140	￼
6	United States	24,080	￼
7	Czech Republic	22,230	￼
8	Austria	18,760	￼
9	Russia	17,700	￼
10	Norway	17,290
(Near bottom) India 810
(Kwh – kilowatt 1,000 watt)
ဒါတွေ ပေါက်ကျရင် မလွယ်လှဘူးဗျို့ ။
သူရို့ လဲ ကျုပ်တို့ လိုပဲ ရောင်းလိုက် ၀ယ်လိုက်ပဲလားဗျား..
ရေကာတာကြီးတွေက အလန်းတွေပါလားဟ …
နာ မြင်ဖူးတာတော့ နာရို့ရွာက ဆည်လေးပဲ မြင်ဖူးတာ ..
ခုဟာတွေက ချယ်တွေပဲ ..
ကျေးကျေး ဟိုလူဂျီး …
တချို့ရေကာတာတွေက ပင်လယ်ကို ပိတ်ပီးဆောက်ထားတာထင်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေကာတာ ဆောက်မယ့်ကိစ္စဟာ ဧရာဝတီ ကို မထိပါးခဲ့ရင် ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားသော တစ်ကယ့် မိန်းနေရာတွေ ပျောက်ကွယ်မယ့် အံတရယ် မရှိဘူးဆိုရင် ၊ တည်ဆောင်မယ့်အဖွဲ့ ဟာ နိုင်ငံခြားသားချည်းဘဲ မဟုတ်ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံက တစ်ဝက် ပါခဲ့မယ် ဆိုရင် ၊ ဘယ်ပြည်သူားမှ ကန့် ကွက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ကို ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ၊ ပိုက်ဆံ မတတ်နိုင်လို့ သမီးကို အိမ်ဖော်အဖြစ်ဘဲ ပေးလိုက်တာကို ၊ အိမ်ဖော်လိုလဲ ခိုင်းတယ် ၊ တစ်အိမ်လုံးက လဲ ဝိုင်းမုဒိန်းကျင့်တဲ့ ပုံမျိုးဖြစ်နေသလား လို့ ။
အားပေးစကားပြော ထင်မြင်ချက်ရေး ကြတဲ့
ဒီကိစ်စ က ကျယ်ပြန့်လွန်းလို့ဖြစ်တာ၊
ငလျင်ဘေးဒဏ်များအကြောင်းလည်း ရေးဘာအုံး။ မနေ့ဂ အီတလီမှာ ငလျင်အလတ်စားဂလေး လှုပ်သွားတာ လူ၁၅ယောက်သေပြီး ၃၅၀ဒဏ်ရာရဒယ်။ မြစ်ဆုံရေကာတာ ဆောက်ဖြစ်လို့ အဲဒီအနားမှာ လှုပ်ခဲ့ရင် မတွေးဝံ့စရာဗဲ။ ဆိတ်လျော့လိုက်ပါ ကြေးမုံဂျီးရယ်…အခုတောင် ဖားကန့်မှာ တရုတ်ပိုက်ဆံနဲ့ ဘီလူးသရဲစီးသလို ကျောက်စိမ်းတူးနေတဲ့ ပြည်တွင်းပိုင်ရှင်အမည်ခံ ကျောက်ကုမ္မဏီတွေကို မောင်းထုတ်နေပြီ။ ဒီပုံဈံဆို ဖွတ်မရ ဓါးမဆုံး ဖြစ်တော့မယ်ထင်ပ..။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုဗဲ ကြေးမုံဂျီးရေ…။ တဂယ်လို့ ကိုယ့်အမှားကိုယ်သိ ပြုပြင်ဂျင်ဘာဒယ်ဆိုရင် ဦးကြောင်ဆီ အချိန်မရွေး ပျံလာခဲ့ပါ။ လေးဂွနဲ့စောင့်နေမည်…။